वर्ग चेतनाको दिग्भ्रम- विचार - कान्तिपुर समाचार
शीतयुद्ध समाप्त भएसँंगै फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लाष्ट म्यान’ पुस्तकमार्फत वैचारिक युग समाप्त भएको दाबा गरेका थिए । फुकुयामाको तर्कको विपक्षमा उनैका गुरु प्राध्यापक श्यामुल पी हन्टिङटनको पुस्तक ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड द रिमेकिङ वल्र्ड अर्डर’मा भनिएको छ, ‘अबको नयाँ विश्वमा स्थानीय राजनीति राष्ट्रिय (जातीय) हुनेछ भने विश्व राजनीति सभ्यताहरूको हुनेछ, महाशक्तिहरू बीचको दुश्मनी सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वले प्रतिस्थापित गर्नेछ ।’ यसै तथ्यले विश्व राजनीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरायो,जसको परिणाम सन् १९९० यता विश्वभर माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरू र बुर्जुवा पुँजीवादीहरू कुनै राजनीतिक क्रान्तिको संवाहक रहेनन् ।
कुनै समय आहुतिले समर्थन गरेको माओवादीको सशस्त्र युद्धताकाको निष्कर्षले पनि उपरोक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ । जहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्तासम्म पुग्नेमात्र नभई (जातीय) मोर्चाले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत स्वशासन नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्छ । जातीय स्वशासन केन्द्रीय सत्ताकब्जागरेपछि मात्र होइन, अहिलेदेखि लागु गरेर जाने हो । त्यो मोर्चामार्फत अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । यसकारणले कि त्यो नैसत्ताको बीज हो ।’
लेखकले कुनै मानव समूह राष्ट्र (नेसन) हुन पाँच मौलिक अवस्थाको चर्चा गरेका छन् । कसैलाई राष्ट्र हो या हैन भनेर परिभाषित गर्ने आधार कसले तोक्ने ? आजको उत्तरऔपनिवेशिक कालमाराष्ट्रको माक्र्सवादी परिभाषाका मापदण्डको वैधता छ ? लेखक माक्र्सवादी प्रगतिशील सांस्कृतिक राष्ट्रका आधारहरूलाई स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने मनोभावबाट ग्रसित भएको बुझिन्छ ।
जुनचीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिमार्फत स्थापित गर्ने कासिस भए पनि महाभुल सावित भयो । उत्पीडित राष्ट्रहरू आफूहरूलाई परिभाषित गर्ने अधिकार अरुसँंग छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्छन् । ग्रहाम इ. फुलरलाई मान्ने हो भने राष्ट्र र राज्यत्वका लागि स्पष्ट योग्यता छैन ।
उदाहरणका रूपमा पश्चिमयुरोपेली पुँजीवादी मुलुकहरूले सुरुमा जातीय पहिचानकासन्दर्भमा राज्यभित्रै अलगावमुखी राष्ट्रियताहरूलाई दबाउनखोजे । पछि उनीहरूले के स्वीकार गरे भने विभिन्न जातीय पहिचानहरू मुलुकमा मूल भएर रहिनै रहनेछन् । पूर्वी युरोपका सबैजसो कम्युनिष्ट मुलुकहरूले फरक राष्ट्रियता (जातीयता)
यी तीन तत्त्व भएको अवस्थामा जातिहरूलाईआफ्नो छुट्टै राज्य जरुरत पर्दैन । राष्ट्रियता सामाजिक संगठनको आधुनिक आधार हो । व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहिचानको खोजी र यसैसँग जोडिएर आउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनिशक्तिशाली प्रेरक तत्त्वहरू हुन् ।
आदिवासी (स्थानीय) जनताका अनौपचारिक संस्थाहरूलाई औपचारिक संस्थाका रूपमा विकसित गर्दै बहुल राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुनेछ । नेपाल यहाँका ऐतिहासिक राष्ट्रहरूले आरोप लगाएकोजस्तो अधिनायकवादी तथा औपनिवेशिक हैन भनेर पुष्टिगर्दै सबैको साझा राज्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आजकोअहम् सवाल हो ।
शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार मानिसलाई लक्षित गरेर बेटी बचाउ अभियान चलाउनुपर्छ ।
माघ २८, २०७५ रीता साह
काठमाडौँ — प्रदेश नं. २ ले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान थालेको छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक बेटीलाई प्रदेश सरकारले एक लाखको विमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक पालिकाबाट यो अभियान सुुरु गरिँदैछ । यस्तो कल्याणकारी अभियानले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित समूह र ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारम्परिक एवं र सांस्कृतिक पक्षको विश्लेषण हुन जरुरी छ । अभियानले बेटी कसलाई मानेको छ ? जन्मेदेखि २० वर्षसम्मका लागि मान्ने कि बिहे नहुन्जेलसम्मकालाई ? प्रदेशमा बेटीको जनसंख्या कति छ ? जातिगत र क्षेत्रगत विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्छ ।
‘बेटी बचाउ’ र ‘बेटी पढाउ’ एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यिनको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण हुन जरुरी छ । बेटी बचाउ अभियान बेटी
भू्रणको हत्या, बेटी बच्चा फाल्ने, बालविवाह तथा दाइजोजस्ता कुरीतिबाट बचाउन हो ।
धेरै बेटी जन्मिनु अघि मारिन्छन् । गर्भमा रहेको बेटीलाई बचाउनसके यो अभियान सार्थक बन्छ । तथ्यांक विभागले हाले सार्वजनिक गरेको प्रदेश अनुसारको जनसंख्या विवरण अनुसार प्रदेश नं. २ मा मात्र महिलाको जनसंख्या कम छ । यस प्रदेशमा पुरुष ५०.३ प्रतिशत र महिला ४९.७ प्रतिशत छन् अर्थात महिलाको संख्या ३१ हजार ७ सयले कमी छ ।
जिल्लागत पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडाैं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिला कम छ । जातिगत आधारमा ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे जातिमा पुरुषभन्दा महिला कम छन् । २०७४ पुसमा युएन ओमनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार ७७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाका २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भू्रण परीक्षण गराउँछन् । तीमध्ये अधिकांश मधेसका र प्रदेश २ का जिल्ला हुन् ।
यी तथ्यांकले मधेसका जिल्लामा बेटी घट्नुको मूल कारण बेटी भू्रणको हत्या हो भन्ने देखाउँछ । यो मधेसी समाजमा रहेको लंैगिक विभेदको पराकाष्ठा हो । बेटी भू्रणहत्या गर्ने अधिकांश शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार हुनेहरू छन् । तिनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा नगरेसम्म बेटी बचाउ अभियान सफल हुन गाह्रो छ । कतिपयले छोरी बच्चा जन्मिसकेपछि जिउँदै वा मारेर फाल्ने गर्छन् । केही अघि महोत्तरी जिल्लाको औरहीमा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । मधेसमा यस्ता घटना बाक्लै हुन्छन् ।
मधेसमा बढी छोरी हुनेले बालविवाह गर्ने घटना पनि प्रशस्तै हुने गर्छ । विशेष गरेर दलित र मुस्लिम समुदायमा सानै उमेरमा बिहे हुने गर्छ । ग्रामीण भेगको निम्न वर्गका परिवारमा बढी बालविवाह देखिन्छ । डोम समुदायमा सानैमा बिहे गरिएन भने ‘केटा पाउँदैन’ भनिन्छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा देखिएको छ ।
बेटी बचाउन दाइजो प्रथा उन्मूलन आवश्यक छ । दाइजो लेनदेन अहिले सबै समुदाय, वर्ग, जात र क्षेत्रमा हुने गर्छ । दाइजो लेनदेनको प्रकृति र प्रवृत्तिमात्रै फरक छ । कतै पैसाको लेनदेन हुन्छ भने कतै सामान, गरगहनाको लेनदेन हुन्छ । दाइजो लेनदेन अशिक्षा र चेतनाको कमीले हुने होइन, यो शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा झन् बढी झांगिएको छ । बालिका बिमा कार्यक्रमले दाइजो तथा बालविवाह न्युनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तर यसलाई गरिबमुखी बनाउन सक्नुपर्छ ।
बेटी पढाउ अभियानले प्रदेश २ को बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? सबै जाति र वर्गका बेटीको शैक्षिक अवस्था समान खालको छ कि फरक ? अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९५ प्रतिशत छ । प्रदेश नम्बर ३ को सबैभन्दा बढी ७४.८५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ प्रतिशत छ ।
१५ वर्ष माथिका महिलाको जातजाति अनुसारको साक्षरता दर पहाडी ब्राह्मण६७.८ प्रतिशत, क्षत्री ५४.४ प्रतिशत, तराई ब्राह्मण/क्षत्री (राजपुत) ७०.३ प्रतिशत, तराई अन्य जात २९.६ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२.९ प्रतिशत, मधेसी दलित १२.३ प्रतिशत, नेवार ६७.९ प्रतिशत, अन्य पहाडी जनजाति ५३.१ प्रतिशत, तराई जनजाति ४१.८ प्रतिशत, मुस्लिम २३.२ प्रतिशत छ । यसले मधेसमा दलित, मुस्लिमको साक्षरता दर निकै कम देखिन्छ ।
बेटी पढाउ अभियानले मधेसभित्रकुन जातका बेटी पढाउन विशेषजोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने यसतथ्यांकले देखाउँछ । बेटी बचाउ र बेटी पढाउ अभियानको सुरुवात जनकल्याणकारी सोचका साथ भएको छ । यस अभियानको नारामा बेटी बचाउबेटी पढाउ सँगसँगै बेटी बढाउपनि जोड्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ को पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या घट्दो क्रममा छ, जसले कालान्तरमा समस्याको रूप लिन सक्छ । यसले बालविवाह र अनमेल विवाहलाई बढावा दिन सक्छ ।
दाइजो प्रथा र छोरी भू्रणहत्या रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रमले पुग्दैन । यो काम शिक्षित एवं सचेत नागरिकले गोप्य तरिकाले गर्छन् । भू्रणहत्या विरुद्ध खासै कसैले उजुरी गर्दैन । यसलाई रोक्न विशेष संयन्त्र बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बालविवाह र शिक्षाका लागि विशेषऐन बनाएर अभियान चलाउनुपर्छ । यस्ता अभियान गाउँमुखी रगरिबमुखी हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:५२